चितवनबाट करिअर थालेका सन्दीपको यस्तो छ क्रिकेट यात्रा, कुन कुन खेलमा सबैलाइ चकित पारे ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
चितवनबाट करिअर थालेका सन्दीपको यस्तो छ क्रिकेट यात्रा, कुन कुन खेलमा सबैलाइ चकित पारे ?
काठमाडौं । इंडियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)मा नेपाली युवा क्रिकेटरले खेल्ने निश्चित भएको छ । आईपीएल अक्सनको दोस्रो दिन दिल्ली डेयरडेविल्सले सन्दीप लामिछानेलाई २० लाख भारुमा क्लब भित्र्याएको छ । यससँगै सन्दीप आईपीएल खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बन्दै इतिहास रचेका छन् ।
चितवनबाट क्रिकेट यात्रा सुरु
छोटो समयमा क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका सन्दीप लामिछाने सन् २००० मा जन्मिएका हुन् । सन् २०१४ को नोभेम्बरमा क्रिकेट एसोसिएसन अफ चितवन एकेडेमीबाट उनले क्रिकेट सिके । क्रिेकट क्लबमा भर्ना भएको दुई वर्षमै उनी राष्ट्रिय टीममा पर्न सफल भए । उनले सन् २०१६ मा नेपाली क्रिकेटमा डेब्यू गरेका थिए । तल्कालीन नेपाली राष्ट्रिय टीमका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेले चितवनमा सन्दीपको खेल देखेर उनको काठमाडौं यात्रा तय गराएका थिए । त्यसपछि सन्दीपले पछाडी फर्केर हेर्नु परेन ।
विश्वकपको ह्याट्रिकले चर्चा
सन् २०१६ मा बंगलादेशमा भएको आईसीसी यु-१९ विश्वकप क्रिकेटमा उनले आयरल्याण्डविरुद्धको खेलमा ह्याट्रिक लिएका थिए । आयरल्याण्डले निर्धारित ५० ओभरमा मात्र १३१ रन बनाएको थियो । उनले आयरल्याण्डका प्रभावशाली ब्याट्सम्यानको लाइन अप ध्वस्त बनाएका थिए । सन्दीपले खेलको ३१ औं ओभरको अन्तिम तीन बलमा तीन खेलाडीलाई पेभेलियनको बाटो देखाएका थिए । त्यसबेला उनले २.७ को इकोनोमी कायम राखेका थिए, जसमा ५ विकेट उनले आफ्नो खातामा लेखाएका थिए ।
आईसीसी यु–१९ विश्वकप छनोटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन
सिंगापुरमा भएको आईसीसी यु–१९ विश्वकपअन्तर्गत एसिया क्षेत्रको छनोटमा सन्दिप लामिछानेले जादुयी बलिङ गरे । उनले ६ खेलमा २४ विकेट हात पारेका थिए । उनले पहिलो खेलमा आयोजक सिंगापुरमाथि २.६२ को इकोनोमीमा पाँच विकेट लिएका थिए । त्यस्तै दोस्रो खेलमा मलेसियामाथि ५ विकेट लिएका थिए भने तेस्रो खेलमा अफगानिस्तानविरुद्ध २ विकेट लिएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनबारे कारण देखाउ आदेश
सिंगापुरसँगको अर्को खेलमा उनले १० ओभर बलिङ गरेर ४ विकेट लिए । पाँचौ खेलमा उनले मलेसियामाथि ९ विकेट लिन सफल भएका थिए ।
आईपीएलमा नेपाली खेलाडीका लागि बाटो खुला
सन्दीप लामिछाने आईपीएलमा दिल्ली डेयरडेविल्ससँग अनुबन्ध भएपछि नेपाली क्रिकेट र क्रिकेटप्रेमीहरुका लागि बाटो खुलेको छ । प्रतिभावन युवा क्रिकेटरको आईपीएल यात्राले अन्य क्रिकेटरका लागि पनि माध्यम हुनेछ । सन्दीपले आईपीएलमा दिल्ली डेयरडेविल्सबाट मैदानमा उत्रिन भने अझै संघर्ष गर्नुपर्नेछ । क्लबभित्र शीर्ष १८ मा पर्नेलाई मैदानका लागि सहज हुनेछ । अझ मैदानमै उत्रन भने टीम ११ मा पर्नुपर्ने हुन्छ ।
१५,माघ.२०७४,सोमबार १२:०० मा प्रकाशित
← भूकम्पका बेला चर्को ब्याजदरमा विभिन्न बैंकबाट रकम लिएरखरिद गरेको जस्तापाता बेच्ने तयारी, टेन्डरमार्फत बिक्री गर्न लागियाे !
वाम एकता : यस्ता छन् पर्दाभित्रका खेलहरु, कांग्रेसको सफलता, एमालेमा दुई धार- अध्यक्ष नदिएर माओवादी लतार्ने एमाले लाइन ! →